Semalt waxay bixisaa Faa'iidooyinka macaamilka ee Qalabka Kaydinta Macluumaadka
Sida kale ee kale shabakadaha adeega adeega, GitHub waxay ka dhigayaan macluumaadka laga bilaabo
shabakadaha kala duwan si dhakhso ah oo wax ku ool ah. Qalabkani wuxuu inta badan xajiyaa xogta laga soo qaato sawirrada iyo waxa uu ka dhigayaa waayo-aragnimadaada xiisaha leh.
Hoggaamiyeyaasha Ganacsiga waxay si joogta ah ula socdaan macluumaadka oo waxay rabaan in ay si fiican u xoqdo, iyada oo aan wax u dhimeyn tayada. GitHub waa qalabka kaliya oo ururiya, xoqa oo kaydiya xogtaada qaabab la jecelyahay. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka kala duwan ayaa lagala hadlay hoos.
1. GitHub waxay kaa caawineysaa inaad soo qaadato xogta qiyaasta ah
Guud ahaan GitHub waxaad ka uruurin kartaa oo aad abaabusho xogta shabakada internetka waxayna kuu soo diri kartaa darawalkaaga adag. Waxaa jira tiro badan oo sawirro iyo fiidiyowyo kuwaas oo ku jira macluumaad faa'iido leh. Adeegyada adeegga shabakada caadiga ah ee caadiga ah, suurtagal ma ahan in laga qaado xogta dukumintiyada PDF, faylasha JPG iyo PNG. Si kastaba ha ahaatee, GitHub wuxuu kuu fududeynayaa inaad xoqdo macluumaadka dokumentiyada PDF iyo noocyada kale ee faylasha. Si gaaban, GitHub wuxuu kaa caawinayaa inaad fahamto dhaqdhaqaaqa ganacsiga si wanaagsan, wuxuuna furi doonaa albaabada fursado cusub.
2. Helitaanka xogta saxda ah ee GitHub:
Qalabka saarista macluumaadka aan isticmaalno ma helno xog sax ah oo sax ah. Si ka duwan adeegyadaas, GitHub ayaa si sax ah u ururiya xogta iyo falanqaynta tayada. Sidaa darteed haddii aad rabto inaad xoqdo macluumaadka goobta tartanka, waa inaad isku daydaa GitHub. Qalabkani wuxuu hubiyaa natiijooyin tayo sare leh mana bixinayo waxyaabo kaladuwan oo ku saabsan dadka isticmaala.
3. GitHub kaydiyaa waqtigaaga:
Xawaaraha xogta la heli karo wuxuu sameynayaa dhammaan isbeddelka. Iyada oo GitHub, waxaad xoqin kartaa ilaa 20,000 sawirro iyo dukumiintiyo Word ah 50 daqiiqo. Sidaas daraadeed, qalabkani wuxuu kaydiyaa wakhtigaaga iyo tamarta iyo xogta macluumaadka xawaaraha sare. GitHub wuxuu ku habboon yahay bilawga iyo webmasters waxayna ka caawisaa inay abuuraan talooyin dheeraad ah internetka.
4. Ku sii hadal tartanka guusha GitHub:
Ka faa'iideysiga awoodda xogta waxay muhiim u tahay isbeddelka. Iyadoo GitHub, waxaad sii joogi kartaa tartan waxaana laga yaabaa in aad aragto isbedel suuqa socda. Qalabkani wuxuu bixiyaa macluumaad ku saabsan goobaha e-ganacsiga, shirkadaha FMCG, iyo goobaha suuqyada, taas oo kuu fududeyneysa inaad ogaatid meesha aad ka taagan tahay. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxay ka caawisaa kobcinta iyo xayeysiidaada astaantaada hab fiican.
5. Dhammaan xogta hal meel:
Guud ahaan, waxaad ku heli kartaa xogta qaabab la jecelyahay. Internetku wuxuu soo saaraa shan iyo toban daqiiqo oo xog ah daqiiqad kasta. Qalabkani wuxuu kaa caawin doonaa xogta xoqidda ka socota goobaha warbaahinta bulshada iyo wargeysyada. Waxaad sidoo kale bartilmaameedsan kartaa shabakadaha teknoolajiyada iyo shabakadaha dukaamada si loo hagaajiyo darajadaada bogga. Uma baahnid inaad wax ka qabato macluumaadka aan habooneyn ama qayaxan sababta oo ah GitHub waxay kuu qabanqaabisaa xogtaada qaab la akhristo oo la iskudhin karo waqti badanna kaydiyaa. Qalabkani wuxuu ku habboon yahay shirkadaha, ganacsatada internetka, hay'adaha shirkadaha iyo safarada.
quruxda buugan xoqitaanka adeegu wuxuu yahay in si dhammaystiran loo habboonaayo oo ku habboon shuruudahaaga si habboon. Iyada oo GitHub, waxaad raadin kartaa ereyada muhiimka ah ee tartamayaashaada, muujiya boggagaaga internetka iyo macluumaadka laga soo qaato labada xariir ee gudaha iyo dibeddaba.Tiro badan oo shirkado ah ayaa ku kalsoon in GitHub u isticmaalaan qalabkan si joogto ah Source .